Endpoint များအတွက် Bitdefender GravityZone Security - Bitdefender Myanmar
Endpoint များအတွက် Bitdefender GravityZone Security
အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို အလွှာလိုက် Endpoint လုံခြုံရေး ဖြင့် ရပ်တန့်လိုက်ပါ
အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် ကာကွယ်ခြင်း
Endpoint များအတွက် Bitdefender ၏ GravityZone Security သည် အဆင့်မြင့်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကိုက်ညီပြီး အလွှာလိုက်ဖြစ်သော မျိုးဆက်သစ်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကို သုံး၍ အနိုင်ယူသည်။
လုပ်ဆောင်မှု behavior ကိုစောင့်ကြပ်နိုင်မှု နှင့် တိုက်ခိုက်ပုံနည်းစနစ်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်မှု တို့ပေါင်းစပ်ထားသော မူပိုင် machine learning နည်းပညာများက GravityZone ကို ရှိရင်းစွဲ endpoint နှင့် “မျိုးဆက်သစ် AV” ဆိုသူတို့ ခုခံကာကွယ်မှုများ မလုပ်နိုင်သော ခြိမ်းခြောက်မှုများထံမှ ကြိုတင်ကာကွယ်၊ ထောက်လှမ်း ပြီး ပိတ်ဆို့ မှု လုပ်စေနိုင်သည်။
၎င်းမှ သံသယရှိဖွယ်အပြောင်းအလဲများကို လျော့နည်းစေခြင်းအပါအဝင် လုပ်ငန်းများအား ပုံမှန်ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်စေရန် အလိုအလျောက် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
စုံလင်သော အလွှာလိုက် မျိုးဆက်သစ် လုံခြုံရေး ချဉ်းကပ်မှု
Machine Learning, Anti-exploit, Application နှင့် Content Control သို့မဟုတ် Process Inspector တို့အပါအဝင် စုံလင်သော နည်းပညာများ နှင့်အတူ တခါမှ မမြင်တွေ့ဖူးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။
အရှိန်လျှော့စရာမလိုပဲ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး intelligence cloud နှင့် machine learning နည်းပညာများကို သုံး၍ Bitdefender မှာ သုံးစွဲသူများ အရှိန်လျော့နည်းခြင်းကို မဖြစ်စေပဲ ခြိမ်းခြောက်မှုများထံမှ ကြိုတင်ကာကွယ်၊ စစ်ဆေးထောက်လှမ်းပေးသည်။
ရိုးရှင်းသော လုံခြုံရေး အုပ်ချုပ်မှုစနစ်
ထိရောက်သော စက်တစ်ခုအနေဖြင့် GravityZone ထိန်းချုပ်စင်တာသည် စတင်လုပ်ဆောင်ရန် မြန်ဆန်ပြီး၊ built in ဖြစ်ပြီးသား လုပ်ဆောင်မှုပွားခြင်း နှင့် ရရှိနိုင်မှုမြင့်မားသော မည်သည့် endpoint အရေအတွက်ကိုမဆို ကာကွယ်ရာတွင် အလွယ်တကူ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ နှင့် အကျိုးရလဒ်များ
Machine Learning သည် အဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်မှုများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီး တားမြစ်ပေးသည်။
Bitdefender သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးတလျှောက် machine learning အား အဓိကအသားပေးသည်။ အင်ဂျင် scan ဖတ်ခြင်း၊ HyperDetect ၊ Sandbox Analyzer ၊ Content Control နှင့် Global Protective Network တို့မှာ machine learning ကိုအသုံးပြုထားသော Bitdefender နည်းပညာ၏ ဥပမာအနည်းငယ်သာ ဖြစ်ကြသေးသည်။
HyperDetect™ သည် Pre-execution အဆင့်၌ တိုက်ခိုက်မှုများကို တားမြစ်ပေးသည်။
Bitdefender HyperDetect တွင် machine learning ပုံစံများနှင့် လှို့ဝှက်တိုက်ခိုက်မှုထောက်လှမ်းခြင်းနည်းပညာ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ထပ်ဆင့် လုံခြုံရေးအလွှာတစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ရပ်များကို pre-execution အဆင့်တွင် စစ်ဆေးထောက်လှမ်းနိုင်ရန် စီမံရေးဆွဲထားသည်။
Sandbox Analyzer သည် ပစ်မှတ်ထားထားသော တိုက်ခိုက်မှုစစ်ဆေးထောက်လှမ်းခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။
Bitdefender Sandbox Analyzer သည် ထပ်ဆင့်စစ်ဆေးရန်လိုသော ဖိုင်များအား cloud sandbox ထံသို့အလိုအလျောက်ပို့ပေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ကုထုံးလုပ်ရပ်များ ယူခြင်း အားဖြင့် အဆင့်မြင့်တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် pre-execution စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းကို ပေးသည်။
Inspector Detect များကိုလုပ်ဆောင်ပြီး Fileless တိုက်ခိုက်မှုများကို ရပ်တန့်ပေးသည်။
Bitdefender Process Inspector သည် တမူထူးခြားသော behavior ကို ရှာဖွေစစ်ဆေးသည့်နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး on-execution အဆင့်မှာပင် ယခင်ကတခါမှမမြင်ဖူးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများရန်မှ အကာအကွယ်ပေးသည်။
Endpoint ထိန်းချုပ်မှု နှင့် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ခြင်း
တိုက်ခိုက်မှုမျက်နှာပြင်ကိုလျော့နည်းစေရန် Patch Management, Full Disk Encryption, Web Threat Protection, Firewall, Application & Device Control အစရှိသော feature သွင်ပြင်လက္ခဏာများစွာ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
Bitdefender Memory Protection အလွှာသည် on-execution အဆင့်တွင် browser နှင့် application အားနည်းချက်များကို ပစ်မှတ်ထားသော အမည်သိသိ မသိသိ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုများ၏ ရန်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ရှုပ်ထွေးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် အမည်မသိ malware အလုံးစုံတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ
Elite သည် ransomware အပါအဝင် ရိုးရာ endpoint protection solution များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သော အမည်မသိ malware နှင့် အဆင့်မြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား အောင်နိုင်သည်။ PowerShell, script-based, fileless တိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် ရှုပ်ထွေးသော malware ကဲ့သို့သော အဆင်မြင့်တိုက်ခိုက်မှုများကို execution မတိုင်ခင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ပြီး တားမြစ်ပိတ်နိုင်သည်။
Fileless Malware အား စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ရပ်ပစ်ပါ
Fileless malware တိုက်ခိုက်မှုများမှာ အန္တရာယ်ရှိသော ကုဒ်ကို memory ထဲတွင် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်စေသည်။ disk ပေါ်တွင် မည်သည့်ဖိုင်မှ မရှိနေသည့်အတွက် ဖိုင် စစ်ဆေးမှုအတွက် စီမံထားသော AV solution များမှာ ဤသို့သော တိုက်ခိုက်မှုကို မမြင်တွေ့နိုင်တော့ပေ။ Bitdefender သည် fileless တိုက်ခိုက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေး၊ တားမြစ်ပြီး ဖျက်ဆီးရန် Advanced Anti-Exploit, HyperDetect™ နှင့် Process Inspector တို့အပေါ်ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သည်။
Macro နှင့် Script-Based တိုက်ခိုက်မှုများအား ရပ်တန့်ပါ
ခြိမ်းခြောက်မှု ကုထုံး၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် တုံ့ပြန်မှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ပါ
ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမိသည်နှင့် Elite သည် အန္တရာယ်ရှိသော ပြောင်းလဲမှုများ၏ process ကို ရပ်ပစ်ခြင်း၊ ယာယီထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း နှင့် လျော့နည်းစေခြင်း တို့ပါဝင်သော လုပ်ရပ်များအားဖြင့် ၎င်းအား တပြိုင်နက် အကျိုးအာနိသင်ပျက်ပြေစေသည်။ Elite သည် ကမ္ဘာတဝှမ်း အလားတူ တိုက်ခိုက်မှုများမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရင်း ခြိမ်းခြောက်မှုအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ GPN, Bitdefender ၏ cloud-based threat intelligence service တို့အား မျှဝေပေးသည်။
ခြိမ်းခြောက်မှုအနေအထား နှင့် မြင်သာမှုကို တိုးမြှင့်ပါ
သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ရပ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သတင်းပို့ပေးသော GravityZone’s Elite ၏ ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် operating system တောင်းခံချက်များ၊ command နှင့် control center များထံသို့ ကျူးကျော်ထိုးဖောက်လာသော လုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများ ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသည့် အပြုအမူမျိုးကို admin များထံ ကြိုတင်သတိပေးနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်စွမ်းရည် ကို မြှင့်တင်ပါ
Bitdefender ၏ တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစပ်ထားသည့် endpoint လုံခြုံရေး agent သည် agent fatigue ဖြစ်ခြင်းကို ပယ်ရှားပေးသည်။ modular ဒီဇိုင်းသည် အမြင့်ဆုံးသင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုကိုပေးပြီး administrator များအား လုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုချမှတ်ရန် အခွင့်ပေးသည်။ GravityZone သည် installation package ကို အလိုအလျောက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီး agent လုပ်ဆောင်သွားမှုကို အနည်းဆုံးကျန်စေသည်။ post-virtualization နှင့် post-cloud လုံခြုံရေး ဗိသုကာများထံမှ အခြေပြုဖန်တီးထားခြင်းဖြင့် GravityZone သည် အပြင်ပန်း၊ virtualized နှင့် cloud ပတ်ဝန်းကျင်များကို ကာကွယ်ရန် ပေါင်းစည်းထားသော လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်မှု platform တစ်ခုကို ပေးသည်။
HyperDetect™ မှ Pre execution အဆင့်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများကို တားဆီးပိတ်ပေးသည်
GravityZone Elite သည် pre-execution တွင် အထူးပြု local machine model များ နှင့် behavior analysis နည်းလမ်းများ ကိုသုံးသော မျိုးဆက်သစ်အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည့် HyperDetect ဖြင့်တွဲပါသည်။ behavior analysis နည်းလမ်းများသည် hacking tools, exploits နှင့် malware ရှုပ်ထွေးမှု နည်းများအား ရှာဖွေရန် လေ့ကျင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရာ endpoint နှင့် “မျိုးဆက်သစ် AV” ဆိုသူတို့ ခုခံကာကွယ်မှုမလုပ်နိုင်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများကို ထိရောက်စွာ တားဆီးပိတ်ပေးသည်။
PowerShell နှင့် အခြား script based တိုက်ခိုက်မှုများ
Bitdefender အလွှာလိုက် မျိုးဆက်သစ် endpoint ကာကွယ်မှု platform
Endpoint ထိန်းချုပ်မှုများ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ထောက်လှမ်းစီစစ်ခြင်း၊ ကုသဖြေရှင်းခြင်း နှင့် မြင်သာမှု များပါသော လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် အလွှာလိုက်ဗိသုကာနည်းပညာကိုသုံးထားသည်။
လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု
Patch Management (Patch အုပ်ချုပ်မှု)
Application Control (အက်ပလီကေးရှင်း ထိန်းချုပ်မှု)
Full-Disk Encryption (Disk အပြည့် စကားဝှက်ခြင်း)
Device Control (စက် ထိန်းချုပ်မှု)
Web-Threat Protection (ဝက်ဘ်အခြေပြုခြိမ်းခြောက်မှု ကာကွယ်ခြင်း)
PRE-EXECUTION အဆင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း
ON & POST-EXECUTION အဆင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း
Process Inspector (ဖြစ်စဉ် စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အရာ)
Access Blocking (ဝင်ခွင့် ပိတ်ခြင်း)
Disinfection & Removal (ပိုးသတ်ခြင်း နှင့် ဖယ်ရှားခြင်း)
Process Termination (ဖြစ်စဉ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း)
အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း နှင့် သတိပေးခြင်း
SIEM Integration (SIEM ပေါင်းစည်းခြင်း)
API Support (API ထောက်ပံ့မှု)
GRAVITYZONE လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေး အချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက်
GravityZone ကို လုပ်ငန်းလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများအပြင် endpoint ကွန်ပျူတာများ၊ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများ၊ သီးခြား၊ အများပိုင် cloud မှ virtual စက်များ နှင့် အီးမေးလ်ဆာဗာများ အပြောင်းအလွဲ တို့ပေးရန် virtualization နှင့် cloud အတွက် အခြေပြုတည်ဆောက်ထားသည်။
အချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက်ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ရန်
FILELESS တိုက်ခိုက်မှုများ SOLUTION အကျဉ်းချုပ်
ခြိမ်းခြောက်မှုပြုသူများမှာ fileless တိုက်ခိုက်မှုများသို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့သွားနေကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ဤတိုက်ခိုက်မှုများကို endpoint လုံခြုံရေး solution များဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင့်အား ပြောပေလိမ့်မည်။ Bitdefender တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်သည့်အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို file-based နှင့် fileless malware ခြိမ်းခြောက်မှုအလုံးစုံများမှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင် လုပ်လျက်ရှိသည်။
ESG စာရွက်ဖြူ “ ENDPOINT လုံခြုံရေးဆီသို့ သင့်တော်ပြီး အလွှာလိုက်ဖြစ်သော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ရပ်”
Bitdefender သည် AV-Comparatives အား အဆင့်မြင့် Endpoint Protection Test လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်ပေးခဲ့သည်။ Bitdefender GravityZone Elite Security သည် Bitdefender မှရွေးချယ်ခဲ့သော ပြိုင်ဖက် endpoint ထုတ်ကုန်များနှင့်အပြိုင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခံခဲ့သည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအား နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ – ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၈ အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှု နှင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု ရ AV-TEST AWARD ဆုများ
“GravityZone က ၎င်းကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အားထုတ်မှုတွေကို ကျောင်းတွေ ပိုမိုထိရောက်မှုရှိလာဖို့ စီစဉ်ရာမှာ နဲ့ ကူညီရာမှာပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့လိုက်တော့တယ်”
Rolland Kornblau, သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ ညွှန်ကြားရေးမှူး , El Rancho Unified School District
AV-TEST အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု ၂၀၁၇ နှစ်စဉ်ဆု
Bitdefender Endpoint Security သည် တခါမှမမြင်ဖူးသော malware များအပါအဝင် မျိုးစုံသော malware များကို ကြိုတင်ကာကွယ် တားဆီးပိတ်နိုင်ခဲ့သော ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ချက်ကြောင့် AV-TEST ၏ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု ကဏ္ဍတွင် အမှတ်အများဆုံး ရရှိခဲ့သည်။ malware နှင့် အခြား အွန်လိုင်း ခြိမ်းခြောက်မှုများအတွက်ရေးသော မူပိုင်ခွင့် ၆ ခုထက်ပိုပါသည့် machine-learning algorithms နှင့်အတူ deep learning နှင့် anomaly-based detection နည်းလမ်းများက အသစ်ဖြစ်ပြီး အမည်မသိသောခြိမ်းခြောက်မှုများကို ထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်ရာတွင် အရေးကြီးကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် ပါသည်။
ထပ်ဆင့် ကာကွယ်မှုအလွှာများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
Unpatched စနစ်များသည် အဖွဲ့အစည်းများအား malware အနေအထားများ၊ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားမှုများ နှင့် data ချိုးဖောက်မှုများဆီသို့ အလွယ်တကူဆွဲခေါ်သည်။ သင့် OS နှင့် Applications များအား Windows install base – workstations တစ်ခုလုံး, physical servers နှင့် virtual servers တလျှောက် GravityZone Patch Management ဖြင့် နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်နေအောင် ထားပါ။
အချက်အလက်မှတ်တမ်းစာရွက်ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ရန် >
FULL DISK ENCRYPTION (Disk အပြည့် စကားဝှက်ခြင်း)
GravityZone FDE သည် Windows (BitLocker) နှင့် Mac (FileVault) မှပေးထားသော encryption mechanisms ကိုအားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် endpoint ၏ hard drive တစ်ခုလုံးအတွက် data ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် မူရင်း device encryption ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ဆီလျော်မှုအပြည့်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်မှုကို သေချာစေသည်။ GZ FDE အား GravityZone Console နှင့် Agent အဖြစ်ပေါင်းစည်းထားပြီး စေလွှတ်ရန် ထပ်ဆင့် agent မလိုသည့်အပြင် install လုပ်ရန် key management server လည်း မလိုပေ။ Full Disk Encryption ကို ထိန်းချုပ်ရန် ရှိရင်းစွဲ endpoint လုံခြုံရေး တည်ဆောက်မှုကို အသုံးပြုခြင်းက အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုအနည်းငယ်နှင့်အတူ ပြည့်ဝသော ဗဟို စေလွှတ်မှုကို တတ်နိုင်သည်။
PROFESSIONAL SERVICES (ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုများ)
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများမှ သင့်လုပ်ငန်း applications လိုအပ်သည့် ထိပ်တန်းကာကွယ်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် သင်၏ Bitdefender solution ကို install လုပ်ခြင်းနှင့် configure လုပ်ရာတွင် ကူညီလိမ့်မည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများမှာ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအား အဆင်ပြေချောမွေ့ကာ ဒုက္ခကင်းသောစတင်ခြင်းကို သေချာစေပြီး အသုံးပြုနေစဉ်တလျှောက် ကျွမ်းကျင်သူများထံမှလမ်းညွှန်ချက် အကျိုးကျေးဇူးများ ပါဝင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သော Bitdefender အင်ဂျင်နီယာများမှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလိုက်နာပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင် လုံခြုံရေး solution ကို install လုပ်စဉ် ကူညီရာ၌ သင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို မှတ်သားပေးထားပါလိမ့်မည်။
သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် မေးလေ့မေးထရှိသော အမေးအဖြေများ
သတ်မှတ်ချက်များ / စနစ် လိုအပ်ချက်များ
WORKSTATION/TABLET OPERATING SYSTEM လိုအပ်ချက်များ
SERVER OPERATING SYSTEM လိုအပ်ချက်များ
WORKSTATION HARDWARE လိုအပ်ချက်များ
SERVER HARDWARE လိုအပ်ချက်များ
ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ HARDWARE လိုအပ်ချက်များ
Internet access for updates and communication with အဝေးနှင့် မိုဘိုင်း endpoint များနှင့် ဆက်သွယ်မှု နှင့် update များအတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု
GravityZone Control Center အား virtual ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနှင့်ပေးထားပြီး အောက်ပါ format များဖြင့် ရနိုင်သည် –
အခြား format များနှင့် virtualization platform များအတွက်ထောက်ပံ့မှုအား တောင်းခံခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်သည်။
BITDEFENDER GRAVITYZONE ဆိုတာဘာလဲ?
Bitdefender GravityZone သည် လုပ်ငန်းငယ်များ မှ အလွန်ကြီးသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် Bitdefender လုပ်ငန်း လုံခြုံရေး solution အသစ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား virtualized infrastructures အပေါ်အပြည့်အဝအခွင့်အရေးယူထားသော အသစ်စက်စက် (သို့သော်) လက်ခံထားပြီးသော သီးသန့် cloud computing architecture ဖြင့် အခြေပြုကာ ပြန်လည်ဖန်တီးထားသည်။ GravityZone သည် Bitdefender ၏ နာမည်ရ antimalware နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ physical, virtualized နှင့် မိုဘိုင်း endpoint များအတွက် ဘုံ လုံခြုံရေး ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးသည်။
GravityZone သည် ဘက်စုံချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုကို သုံးသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ solution တစ်ခုဖြစ်သည်။ antivirus သာမဟုတ်ပဲ လုပ်ငန်းအဆင့် solution တစ်ခုဖြစ်ပြီး စနစ်များ၏စွမ်းဆောင်မှု နှင့် အသုံးပြုသူများ၏ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ virtualization ပရောဂျက် ဦးတည်ချက်များ ရရှိရန်နှင့် data ကိုလုံခြုံစေရန် ကူညီပေးသည်။
Built-in လုပ်ဆောင်မှုပွားခြင်း နှင့် ဝန်တာ-ထိန်းညှိသော mechanism တစ်ခု နှင့်အတူ ၎င်းသည် ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာသော endpoint များကိုကာကွယ်ရန် တောင်းဆိုမှုအပေါ်ရောင်းအားမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် administrator များအား အဖွဲ့အစည်း၏လုံခြုံရေးအနေအထားများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း များစွာသောရာထူးများအတွက် ဒက်ရှ်ဘုတ်များအတွင်းသို့ ဖန်သားမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြင့် မြင်နိုင်ခွင့်ပေးသည်။
BITDEFENDER GRAVITYZONE အသစ် ဆိုတာဘာလဲ?
Platform architecture မှစ၍ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများအထိ GravityZone သည် အသစ်သော အိုင်တီနယ်ပယ်အတွက် ဖန်တီးထားသော တဖန်တီထွင်ထားသည့် မျိုးဆက်သစ် လုပ်ငန်းသုံး လုံခြုံရေး solution တစ်ခုအနေဖြင့် ပေါ်ထွက်လာသည်။ solution သည် စွမ်းအားမြင့် virtualization အပေါ်သတိပြုသော လုံခြုံရေး နှင့်အတူ ရှေ့ပြေး ထောက်လှမ်းမှုနည်းပညာများ အပြင် အသစ်စက်စက် (သို့သော်) လက်ခံထားပြီးသော architecture များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် သောင်းပြောင်းထွေလာနယ်ပယ်များကို ကျယ်ပြန့်သောစနစ်များ၊ အသုံးပြုပုံ ပြုနည်းများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသော တိကျပြီး ပေါင်းစပ်စုစည်းထားသည့် လုံခြုံရေး solution များလိုအပ်သည်။ အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် data များပျံ့နှံ့ခြင်း၏ ခြိမ်းခြောက်မှုအသစ်များ နှင့် အန္တရာယ်များ အတွက် GravityZone အား စွမ်းအားမြင့် လုံခြုံရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် စီမံထားသည်။
Malware ၏ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲလာြခင်း နှင့် profession ဆန်လာြခင်း
အင်တာနက် ထိုးဖောက်မှု မြင့်မားလာြခင်း
Data များ ဆင့်ကဲ တိုးများလာခြင်း
အိုင်တီ သုံးစွဲခြင်း နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ ဆုံမိလာခြင်း
Cloud computing နှင့် virtualization နည်းပညာများ
ဤအရာအားလုံးက အိုင်တီနယ်ပယ်၊ သတင်းအချက်အလက်များ သယ်ပို့၊ အသုံးပြုပုံ ပြုနည်း နှင့် application များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ မည်သို့လုပ်ဆောင်ပုံ ကို ပြောင်းလဲစေသည်။
GravityZone မှာ ၎င်းကိုယ်တိုင် virtualized အလွှာများပေါ် အလုပ်လုပ်သော သီးသန့် cloud solution တစ်ခုအနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ အိုင်တီပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခြုံစေရန် လုပ်ဆောင်မှုပေးသောအရာအဖြစ်ရပ်တည်ကာ အုပ်ချုပ်ရေးဝန်တာများကို လျှော့ပေးခြင်း၊ TCO နိမ့်ပေးခြင်း နှင့် ရင်းနှီးငွေပြန်ရရှိခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ဖြင့် ကူညီပေးသည်။ solution သည် client-server architecture နှင့် ဆက်ဆိုင်သော database များကို အခြေခံသည့် သမိုင်းဝင် solution များ၏ ကန့်သတ်ချက် တိုင်းတာနိုင်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
လုံခြုံရေး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ တိုးတက်မှုမှာလည်း ဆက်လက်ဖြစ်နေသည်။ GravityZone သည် virtualized ပတ်ဝန်းကျင်များ နှင့် မိုဘိုင်း စက်များ ထံသို့ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ချဲ့ထွင် ပေါင်းစပ်လုပ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးပြုသူများမှ သတင်းအချက်အလက်များကို ကွန်ပျူတာ, laptop, tablet သို့မဟုတ် smartphone ဖြင့် ရယူသုံးစွဲရာတွင် တသမတ်တည်းသော အတွေ့အကြုံကို မျှော်လင့်လာကြသည့်အလျှောက် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးမှာလည်း ၎င်းအား အနီး သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ workstation တစ်ခု သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်တစ်ခုမှ သော်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီသည် ရိုးရာ သို့မဟုတ် virtualized infrastructure များသုံး၍သော်လည်းကောင်း ရယူနေမှုအပေါ် ထိန်းသိမ်းမှုပြုလိမ့်မည်။
GravityZone Enterprise လုံခြုံရေးသည် pre-execution တွင် အထူးပြု local machine model များ နှင့် behavior analysis နည်းလမ်းများ ကိုသုံးသော မျိုးဆက်သစ်အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည့် HyperDetect ဖြင့်တွဲပါသည်။ behavior analysis နည်းလမ်းများသည် hacking tools, exploits နှင့် malware ရှုပ်ထွေးမှု နည်းများအား ရှာဖွေရန် လေ့ကျင့်ပေးသည်။
PHYSICAL, VIRTUALIZED နှင့် မိုဘိုင်း နယ်ပယ်များအတွက် ပေါင်းစည်းထားသောလုံခြုံရေး က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
GravityZone သည် ဒီဇိုင်းအားဖြင့် ပေါင်းစည်းထားပြီး တစ်ခုတည်းသော solution တွင် လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များအားလုံး ပါဝင်အောင် ရည်ရွယ်ထားသည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် ၎င်းသည် အဓိက လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေါင်းစည်းပြီး physical, virtualized နှင့် မိုဘိုင်း endpoint များအတွက် တခုတည်းသော ထိန်းချုပ်မှုနေရာတစ်ခုကို ပေးထားသည်။ ရှေ့ဆက်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုတွင် GravityZone အတွင်းသို့ အီးမေးလ် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် လုံခြုံရေးအစရှိသည့် အသစ်သောလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများ အပြင် အခြား platform များအတွက်အထောက်အပံ့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် တိုးမြှင့်မှုများကို ထပ်မံထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
မတူညီသော third-party နည်းပညာများအား တင်သွင်းကာ ၎င်းတို့အားအတူတကွပေါင်းလိုက်ပြီး Module များကို ဟောင်းနေပြီဖြစ်သော architecture တစ်ခုအပေါ်တင်သုံးသည့် အခြားသော solution များနှင့်မတူဘဲ Bitdefender GravityZone မှာ physical, virtualized နှင့် မိုဘိုင်းနယ်ပယ်တလျှောက် စုစည်းထားသော လုံခြုံရေး ထိန်းချုပ်မှု platform တစ်ခုအနေနှင့် အခြေခံမှစ၍ စီမံဖန်တီးထားသည်။ ၎င်း၏ modular ဒီဇိုင်းမှာ လျောက်ပတ်ပြီးတိကျသော လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ရာထူးအခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးကို ခွင့်ပြုပေးထားသည်။ solution မှာ အောက်ပါ စုစည်းထားသော အပိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည် –
GravityZone Control Center – အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်မှု၏ တစ်ခုတည်းသောအမှတ်နေရာကိုပေးသည့် အုပ်ချုပ်မှု platform ဖြစ်သည်။
Endpoint များအတွက် လုံခြုံရေး – Windows workstation များနှင့် server များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
Virtualized ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် လုံခြုံရေး – VMware, Citrix, Microsoft သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် virtualization platform ပေါ်တွင် run သော virtualized Windows နှင့် Linux ဧည့်သည်စနစ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် လုံခြုံရေး – လွယ်ကူသော ပို့ဆောင်မှု နှင့် ထိရောက်သော ထိန်းချုပ်မှုအတွက် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းလုံခြုံရေး ထိန်းချုပ်မှု နှင့်အတူ စိတ်ချသော BYOD ယူသုံးမှုကို တတ်နိုင်စေသည်။
GRAVITYZONE SVE ဝန်ဆောင်မှုက မဖြစ်မနေလား ? ဒါမှမဟုတ် တခြား လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရော ရွေးလို့ရလား ?
GravityZone သည် ၁၀၀% modularized ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အနေနှင့် တစ်ခုချင်းစီတွင် လိုအပ်သည့် ယူနစ်ပမာဏနှင့်အတူ သင် လိုင်စင်တင်ချင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
GravityZone မှာ virtual ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနှင့် ရှိနေသော်လည်း ၎င်း၏စေလွှတ်မှုတွင် Security for Virtualized Environments (SVE) အား activate လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် virtualization ပရောဂျက်များကို စေလွှတ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် သင့်အား SVE ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အကြံပြုရပါမည်။
GravityZone နှင့်အတူ သင့်အနေဖြင့် ထိရောက်သော လုံခြုံရေး နှင့် တိုးမြှင့်သော အုပ်ချုပ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို လားရာ နှစ်ဖက်မှ အကျိုးရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်မှနေ၍ GravityZone virtual ပစ္စည်း၏ ရိုးရှင်းသော turn-key စေလွှတ်မှု၊ built-in လုပ်ဆောင်မှုပွားခြင်း နှင့် mechanism တိုင်းတာနိုင်မှု တို့နှင့်အတူ ဘုံအုပ်ချုပ်မှု နှင့် architecture အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် အုပ်ချုပ်မှုဝန်တာကို လျော့နည်းစေသည်။ အခြားတဖက်၌ SVE ၏ မြင့်မားသော virtualization လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများမှာ virtualization ပရောဂျက်များနှင့်သက်ဆိုင်သော သင်၏လုပ်ငန်းဦးတည်ချက်များကို ရယူရန် နှင့် သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ အလားအလာရှိမှုများကို သိမြင်စေရန် ကူညီလိမ့်မည်။
GRAVITYZONE က ရောထားတဲ့ VIRTUALIZED ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို အထောက်အပံ့ပေးလား ?
ဥပမာ VMware ESXi နှင့် Microsoft Hyper-V အပေါ် VMs အား တပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် လုံခြုံမှုပေးရန် လိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ GravityZone ၏ Security for Virtualized Environments ဝန်ဆောင်မှု ဖြင့် သင်သည် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုတည်းမှနေ၍ virtualization အနေအထားမျိုးစုံကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ GravityZone Control Center သည် VMware vCenter နှင့် Citrix XenCenter တို့နှင့်အတူ ပေါင်းစည်းထားကာ Microsoft Hyper-V, KVM, RedHat Enterprise Virtualization သို့မဟုတ် Oracle Virtualization ကဲ့သို့သော အခြား virtualization platform များစွာကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးသည်။
အကယ်၍ သင် GravityZone Security for Endpoints ကိုသုံးစွဲကြည့်လိုလျှင် ဤနေရာ၌ အလျင်အမြန်အစပြုလိုက်ပါ –
Copyright © Bitdefender Indochina